Mienjana ny Fiangonana #Katolika: Manohana ny #Ffkm ny any #Vatican. | mandimby maharo
Mienjana ny Fiangonana #Katolika: Manohana ny #Ffkm ny any #Vatican.	Posted on 26 April 2013 by Mandimby Maharo	Mazava ny resaka: leo an’i Andry Rajoelina ny any Vatikana ka hanohana ny ffkm mba hisin’ny Tetezamita vaovao. Rehefa avy nihaona tamin’ny Papa Raimasina François ny Fat dia nazava ny famintinana nataon’ny Radio Vatican fa manohana ny “fihaonan-doha fampihavanana natao hitadiavana vahaolana hamahana ny olana ao Madagasikara” nataon’ireo fiombonan’ny fiangonana kristiana malagasy ny ao amin’ny fiangonana katolika.
Tsy azo heverina sady magasadaikatra ny rehetra tokoa manko raha fitondrana tsy lanim-bahoaka fa notendren’ny tondrozotra napetraky ny any avy any ivelany no hanatanteraka ny fifidianana. Mahatsapa koa ny ao amin’ny fiangonana katolika izay “mandray anjara lehibe amin’ny fifampidinihina eo amin’ny firenena, sy ny fananany ireo ratsamangaikany marobe eo amin’ny lafiny fahasalamana sy ny fanabeazana’ fa mila filaminana ny firenena na dia misy aza ireo “ezaka nataon’i Madagasikara amin’ny fitonina sy ny fiverenan’ny fifandraisana iraisam-pirenena.”
Raha fintinina dia fiantsona no nalehan’ny Fat tany amin’i Papa François fa tsy fanasana akory. 15 minitra ny fihaonana teo amin’izy mianaka ireo ary hivoaka tsy ho ela ny fampitam-baovao mikasika izany.